Manomboka ny vanim-potoana fitsangantsanganana fahavaratra: rakotra tarehy, firaketana ary tena ilaina amin'ny fahatongavana ara-potoana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » Manomboka ny vanim-potoana fitsangantsanganana fahavaratra: rakotra tarehy, firaketana ary tena ilaina amin'ny fahatongavana ara-potoana
Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • People • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny fitsangantsanganana an-habakabaka amin'ny fahavaratra 2021 dia mila alamina tsara. Ny seranam-piaramanidina Frankfurt dia miantso ny fanohanan'ny mpandeha.
Betsaka ny olona maniry mafy ny hamelona indray ny drafi-pizorany. Ny fangatahana sidina, indrindra, dia mitombo. Rehefa manomboka ny vanim-potoana fitsangatsanganana fahavaratra dia manantena ny fiakaran'ny isan'ny mpandeha ny seranam-piaramanidina Frankfurt any Alemana ary manantena ny handray mpitsidika 100,000 isan'andro.
Raha ampitahaina, amin'ny fahavaratry ny 2019 - talohan'ny nanombohan'ny areti-mifindra - ny tampon'ny isan'andro dia 240,000 mahery.
Fraport, ilay orinasa miasa ny seranam-piaramanidina Frankfurt, dia namaly haingana ny fihemorana ary nanokatra ny Terminal 2 mba hisorohana ny fitangoronana. Mijanona eo amin'ny toerany ny fepetra fisorohana aretina, toy ny fanakonana tarehy tsy maintsy harahina sy ny fanalavirana ny fiaraha-monina. Na izany aza, mila mandray ny anjarany ny mpandeha amin'ny fandaminana tsara ny diany, ary ny fananana ny antontan-taratasy marina rehetra.
Nanazava i Daniela Weiss avy amin'ny ekipa mpitantana ny terminal Fraport: "Na dia talohan'ny areti-mandringana aza, ny fitsangatsanganana an'habakabaka dia nitaky fanarahana fitsipika isan-karazany - mbola mitoetra ho manan-kery mandraka ankehitriny. Saingy ny Covid-19 dia nahita fiovana tamin'ny dingana maro, ary ny sasany lasa nandany fotoana bebe kokoa vokatr'izany. " Nanazava i Weiss fa, na dia ambany kokoa aza ny isa raha oharina amin'ireo taona teo aloha, dia mety mila mandany fotoana betsaka kokoa ny mpandeha: “Saingy amin'ny fanomanana tsara dia afaka miambina farafahakeliny ny tsirairay. Tianay ny mpandeha mba tsy hanana ahiahy sy hilamina. ”
Namporisihina ireo mpitsangantsangana mba hijery ireo tranokalan'ny seranam-piaramanidina raha te hahalala vaovao farany
"Ny hafatra lehibe ho an'ny mpandeha amin'ity fahavaratra ity dia ny hijerena mialoha ny torolàlana omena ao amin'ny tranokalan'ny seranam-piaramanidina ary miverimberina," hoy i torohevitra momba an'i Weiss. Mifanindran-dalana amin'ny vanim-potoana fara tampony, www.fjkm-airport.com manana endrika vaovao: ny Travel Assistant. Io dia manamafy ny fampahalalana manan-danja rehetra amin'ny toerana iray. Manolotra toro-hevitra, torohevitra ary fitsipika mivaingana mifanaraka amin'ny filaharany araka ny filaharany, mifanaraka amin'ny filaharan'ny dingana amin'ny dian'ny mpandeha - hatramin'ny dingana voalohany, hatramin'ny famonosana entana, hatramin'ny fandaminana ny dia mankany amin'ny seranam-piaramanidina, amin'ny fiomanana amin'ny dia hiverina. Araka ny nomarihin'ny mpitantana ny terminal dia malalaka ny torolàlana saingy, raha jerena ny areti-mifindra, dia ilaina sy tena ilaina tokoa. Nasongadiny fa: “Misy fitsipika maro mety hiova amin'ny fotoana fohy. Ka amin'ity taona ity dia omena torohevitra ny tsirairay hijery tsy tapaka ireo fanavaozana: inona no tokony hataoko? Inona avy ireo antontan-taratasy ilaiko? Ahoana no tokony hataoko? Ary mety samy hafa ny valiny isaky ny mpandeha mankany amin'ny mpandeha, miankina amin'ny drafitry ny dia manokana ataon'izy ireo. ”
Ireo antontan-taratasy rehetra hatolotra
Lafiny iray lehibe ny antontan-taratasy momba ny dia. Ho an'ny toerana maro, pasipaoro na kara-panondro fotsiny no tsy ho ampy intsony. Miankina amin'ny toe-pahasalamany manokana, ny mpandeha dia mety mitaky porofo ofisialin'ny fanaovana vaksiny, fanarenana, fanandramana na quarantine - na an-tsoratra izany na amin'ny endrika elektronika. "Betsaka ny antontan-taratasy tsy maintsy aseho amin'ny fotoana maro, noho izany dia tsara ny handamina ny zava-drehetra ho voalamina tsara sy ho azon'ny fianakaviana iray manontolo atao," hoy ny fanamafisan'i Weiss. Izany dia mifandraika indrindra amin'ny fisavana sy fanaraha-maso ny sisintany. Firenena maro koa no mandidy mialoha ny fisoratana anarana alohan'ny hidirana. Matetika io dia azo vitaina nomerika.
Fonosy havanana, ary aheno ny entana entinao
Araka ny nasongadin'i Weiss: "Ho fanampin'ny fepetra takiana amin'ny Covid-19 vaovao, ny lalàna momba ny entana dia mbola mihatra ary tsy tokony hohadinoina." Amin'ity toe-javatra ity ihany koa dia afaka manampy ny mpanampy amin'ny fitsangatsanganana an-tserasera. Misy fitsipika manokana momba ny entana maro, ao anatin'izany ny ranoka, fanafody, fanadiovan-tanana, entana mampidi-doza, elektronika - indrindra ny fonosana bateria, sigara e-sigara ary banky herinaratra. “Ny siansa irery ihany. Ka tena mamporisika ny mpandeha hanao izay hahafantaran'izy ireo tsara ny toerana tokony hialana amin'ny tsy ampoizina tsy tara sy ny fahataran'ny filaminana. Ankoatr'izay: "Ny hazavana mitsangatsangana dia manamora ny raharaha. Araho ny torolalan'ny kaompaniam-pitateranao momba ny entana ary tazomy hatramin'ny farany ambany ny entanao. Ny tsara indrindra dia singa tokana isaky ny olona. Midika izany fa tsy dia manahirana loatra ho anao sy ho an'ny mpiambina. ”
Omano ny dianao mankany amin'ny seranam-piaramanidina sy ny fotoanao any
Vokatr'io valanaretina io dia mpandeha maro no mitondra fiara mankany amin'ny seranam-piaramanidina fa tsy mampiasa fitateram-bahoaka. Ho an'ireo maniry ny mametraka ny fiarany eny amin'ny seranam-piaramanidina mandritra ny fotoana maharitra, dia tsara ny hamandrihana toerana ao amin'ny garazy terminal mialoha. Azo atao izany amin'ny Internet www.parken.frankfurt-airport.com. Tokony ho tonga eo amin'ny terminal ireo mpandeha farafahakeliny adiny roa alohan'ny hiaingany, ary hijerena an-tserasera alohan'ny handaozany ny tranony.
Mandritra ny seranam-piaramanidina dia tsy maintsy atao mandrakotra mandrakariva ny firakofana. Tokony ho sarontava FFP2 na fandidiana, manarona ny vava sy ny orona. Ireo sy ireo vokatra fidiovana hafa dia misy manerana ny seranam-piaramanidina. Ny mpitsangatsangana dia tokony hanana saron-tava tarehy tsy latsaky ny iray miaraka aminy.
Ny fanalefahana ny fameperana coronavirus dia midika fa nisy fivarotana sy trano fisakafoanana misokatra misokatra indray ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt. Ny mpandeha sy ny mpitsidika dia afaka mahazo antoka ny vokatra sy serivisy ilaina rehetra, ao anatin'izany ny sakafo sy zava-pisotro, ny fanafody lafo vidy, ny fiantsenana tsy andoavam-bola, ny fanofana fiara ary ny fifanakalozana vola. Ny ora sy ny fisokafana dia miankina amin'ny volan'ny mpandeha. Izay mitady zavatra manokana dia tokony hitsidika ny tranokalan'ny seranam-piaramanidina raha mila tsipiriany alohan'ny hahatongavany. Zava-dehibe ny manamarika fa ny fihinanana sakafo sy zava-pisotro dia azo ekena manerana ny seranam-piara-manidina - fa ny fisaronan'ny tarehy dia tokony hesorina vetivety fotsiny, ary ny elanelana azo antoka dia tazonina ho an'ny hafa.
"Tokony hitandremana toy izany koa ny fepetra hafa hisorohana ny aretina", hoy ny fampitandreman'i Weiss. “Nampihatra fepetra marobe izahay, toy ny mari-pamantaran-lavitra, teboka fanadiovana tanana, seza sy efijery voasakana. Andraikitry ny mpandeha anefa ny manatanteraka izany. ”
Misy ny fitsapana manerana ny seranam-piaramanidina
Misy ivon-toeram-pitsapana coronavirus maromaro izao ao amin'ny seranam-piaramanidina Frankfurt. Samy ao amin'ny terminal izy ireo, ary eo amin'ny tetezana mpandeha an-tongotra mankany amin'ny gara lavitra be. Ankoatr'izay, misy ihany koa ny safidy fitsapana an-tsokosoko miaraka amina fidirana sy fidinan'ny entana ao amin'ny Terminal 1 ny hariva alohan'ny sidina. Averina indray, ny Mpanampy amin'ny dia an-tserasera dia afaka manome antsipiriany bebe kokoa. "Na izany aza, tsy maintsy apetraka mialoha ny fitsapana sasany ary tokony hanome vola amin'ny fotoana fanampiny ilaina ianao", hoy ny fampitandreman'i Weiss. Hoy izy namarana ny teniny: “Nanaraka ny fitarihanay rehetra ve ianao? Avy eo dia fitsangatsanganana an-tongotra mankany amin'ny toerana fialantsasatra no miandry. "